नारायणीमा दुई महिनाभित्रै मिनी पानीजहाज’ चल्ने ! - Maxon Khabar
Home / News / नारायणीमा दुई महिनाभित्रै मिनी पानीजहाज’ चल्ने !
नारायणीमा दुई महिनाभित्रै मिनी पानीजहाज’ चल्ने !
चितवन ४ साउन
नेपालकाे चितवन जिल्लामा निर्माणाधीन रहेककाे ‘रिभर क्रुजसिप’ दशैं अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याइने भएकाे छ । राइनो वाटर ईन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लिले काप्रेघाटमा निर्माण गरिरहेको क्रुजसिपलाई पहिलाे पटक पानीमा राखेर गरिएको परीक्षणले सफलता हासिल गरेकाे हाे ।
राइनो वाटरले शनिबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी क्रुजसिप दशैं अगाडि निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिएको छ । साे जानकारी अनुसार २ महिना भित्रमा नारायणी नदीमा मिनी पानी जहाज संचालनमा अाउने भएकाे हाे । हाल भारतीय प्राविधिकको सहयोगमा नारायणी किनारामै पनी ‘क्रुजशिप’ निर्माण भैरहेकाे छ
दुइ तलाकाे रहने मिनी पानीजहाजमा १५ जना क्यू मेम्बर एकै पटक 200 जना सम्मले यात्रा गर्न सक्ने छ जसकाे क्षमता तल्लाे र माथिल्लाे तलाकाे यात्रु बहान क्षमता सय- सय गरी दुइ सय जना जहाजले बाेक्ने छ । 100 फिट लामाे पानीजहाजकाे चौडाई २५ फिट को हुनेछ माथिल्लो तलामा बसेर यात्रुले दृश्यावलोकन गर्न समेत गर्न सक्नेछन ।
‘क्रुजशिप’ राख्नको लागि पानीको च्यानल काटेर १५ फिट गहिरो स्टेशन निर्माण भइसकेको छ । क्रुजशिप निर्माण पक्षले मिनी जहाजलाइ पहिलो चरणमा देवघाटबाट काप्रेघाट सम्म सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछि मुग्लिन र त्रिवेणी धामसम्म लैजान सकिने बारे थप अध्ययन गरिने तयारी भएकाे बताएका छन । नेपालमा पहिलो पटक निर्माण हुदै गरेकाे याे क्रुजशिपले पर्यटन क्षेत्रमा निकै ठुलाे भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरीएकाे छ ।